Thu Aung Ye Nyunt's Page - Myanmar Network
Thu Aung Ye Nyunt
Thu Aung Ye Nyunt's Likes
Thu Aung Ye Nyunt's Friends
Thu Aung Ye Nyunt's Discussions
Started this discussion. Last reply by Zaw Hteik Oct 25, 2015.3Replies7Likes
ESLPod767 by Thu Aung Ye Nyunt…Continue
ESL PODCAST 164-SEEING A SPECIALIST
Started Feb 12, 20120Replies2Likes
Started this discussion. Last reply by kyawtun May 11, 2012. 12 Replies 16 Likes
လျှို့ဝှက်ချက် (၁)တွေးတောခြင်း မပြုပဲ အင်္ဂလိပ်စကားကို အလိုအလျှောက်ပြောခြင်း စကားလုံးများသည် မိမိ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ အလိုအလျှောက်လွယ်ကူစွာထွက်လာခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသူတိုင်း၏…Continue
Started this discussion. Last reply by Nay Chi Lin Dec 27, 2013. 125 Replies 245 Likes
လျှို့ဝှက်ချက် (၁) တွေးတောခြင်း မပြုပဲ အင်္ဂလိပ်စကားကို အလိုအလျှောက်ပြောခြင်း စကားလုံးများသည် မိမိ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ အလိုအလျှောက်လွယ်ကူစွာထွက်လာခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသူတိုင်း၏…Continue
Yellow Ribbon From Peaceangel
Thu Aung Ye Nyunt's Page
At 8:22 on November 21, 2013, Tun Kyaw said…
At 1:14am on March 24, 2011, Peaceangel gave Thu Aung Ye Nyuntagift…
Yes bro, i am afraid to ride of it :P Welcome to you! Haveagreat time! :)